၂၁ ရာစု မှာ အမှန် အကန်အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှ အချို့ – Gentleman Magazine
၂၁ ရာစု မှာ အမှန် အကန်အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှ အချို့
အပေါ်က လုပ်ငန်းတွေ ဘာကြောင့် အောင်မြင်နေလဲ ဆိုတာ သူတို့အားလုံး မှာ ဘုံ တူညီချက် ရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံး က ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ နဲ့ ဝယ်ယူသူကြား မှာ အဆင့် နည်း နိုင်သလောက် နည်းအောင် လုပ်ပေးထားပြီး ဝယ်ယူသူ အနေနဲ့ ဈေး အသက်သာဆုံး ရရှိနိုင်အောင် အကျိုးဆောင်ထားလို့ရပါတယ်။ ရောင်းသူ အနေနဲ့ ၁၀ တန်ကို ၁၀၀ ရောင်းမရသလို . ဝယ်သူအနေနဲ့လဲ ၁၀ တန်ကို တန်ရာတန်ရာ ၁၀ ပဲ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်ရင်းနှီးသူက မှ အတင်းလာ တိုက်တွန်း ဝယ်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် တော့ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်ပြီး သက်သက်သာသာ ရနိုင်တဲ့ အတွက် အောင်မြင်နေတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်းထိုနည်းတူပါပဲ။ လာမယ့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုမှာ လူတွေ အင်တာနက်နည်းပညာ နဲ့ ရင်းနှီး လာပြီ ဆိုရင် ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူကြားမှာ ကြားဝင် အမြတ်ထုတ်ဖုို့ဆို တာ နည်းလာမှာပါ။
အခုဆိုရင် ဘာပဲ ဝယ်ဝယ် .
ကားဝယ်မယ်ဆို . .
အိမ် ခြံ မြေ ရောင်း ဝယ် ငှား ဆိုရင် . . .
ဒါကြောင့် ၂၁ ရာစုမှာ အမှန် အကန် အလုပ်ဖို့ လိုပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် ခေတ်နဲ့အညီ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ် အောင် ကုိုယ်စွမ်းရည် စိတ်စွမ်းရည်အမြဲ မြှင့် ပြီး နေတက်ထိုင်တက် ဖို့ . ကိုယ်ဝါသနာပါပြီး သူများ အကျိုး ကိုယ့်အကျိုး နှစ်ဖက် မျှမျှတတ ဖြစ်မယ့် အလုပ်များကို ရွေးချယ်တက်ရန်လိုပါတယ်။
ဒါဆို လွယ်လွယ် ချမ်းသာအောင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ သူတွေ အတွက် ကိုယ်ဝါသနာပါပြီး လူအများအတွက် အကျိုးရှိ လို့ ကိုယ့်ကို ပြန်အကျိုးပေးမယ့် လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။ လူများကို နင်းပြီး ကိုယ်အတွက် အကျိုး ရှိမယ့် အသပြာ ငွေအမြတ်အစွန်းရမယ့် အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုပါက ရေရှည် ခိုင်မြဲ မှာ မဟုတ်တာကို သတိရပါ။ အကောင်းဆုံး ဥပမာကတော့ အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်ပြီး လူတစ်စု ကောင်းစားဖုို့အတွက် လူ အများကို စတေးသလို ဖြစ်နေမှာပါ။ သုံးတဲ့ လက်နက်ပဲ ကွာပါမယ် . သဘောတရားကတော့ အထူးမခြားနားပါ။ ကိုယ်လုပ်တာကောင်းနေရင် တော်တော်နဲ့ ဘယ်သူကမှ လာပြီး မကောင်းဘူး အပြောပါဘူး။ မကောင်းမှသာ အပြောခံ ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် သတိလေးများ ထားစေချင်ပါတယ်။
ဆက်ရန်ရှိ . . . . . .
MULTI-LEVEL MARKETING ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ ?
MULTI-LEVEL MARKETING (MLM) စနစ်၏ လိမ်ဆင်များ
အလုပ်မလုပ်ပဲချမ်းသာ အောင်လုပ်နည်း . . .
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
၂၁ ရာစု မှာ အမှနျ အကနျအောငျမွငျနတေဲ့ စီးပှားရေး
အပျေါက လုပျငနျးတှေ ဘာကွောငျ့ အောငျမွငျနလေဲ ဆိုတာ သူတို့အားလုံး မှာ ဘုံ တူညီခကျြ ရှိပါတယျ။ သူတို့အားလုံး က ကုနျပစ်စညျး ထုတျလုပျသူ နဲ့ ဝယျယူသူကွား မှာ အဆငျ့ နညျး နိုငျသလောကျ နညျးအောငျ လုပျပေးထားပွီး ဝယျယူသူ အနနေဲ့ စြေး အသကျသာဆုံး ရရှိနိုငျအောငျ အကြိုးဆောငျထားလို့ရပါတယျ။ ရောငျးသူ အနနေဲ့ ၁၀ တနျကို ၁၀၀ ရောငျးမရသလို . ဝယျသူအနနေဲ့လဲ ၁၀ တနျကို တနျရာတနျရာ ၁၀ ပဲ ပေးရမှာဖွဈပွီး ဘယျရငျးနှီးသူက မှ အတငျးလာ တိုကျတှနျး ဝယျခိုငျးမှာ မဟုတျပါဘူး။ တကယျတမျး လိုအပျနတေဲ့ သူတှအေတှကျ တော့ အမြားကွီး အထောကျအကူ ဖွဈတဲ့ အတှကျ သကျသကျသာသာ ရနိုငျတဲ့ အတှကျ အောငျမွငျနတောပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ လညျးထိုနညျးတူပါပဲ။ လာမယျ့ ဆယျစုနှဈ တဈခုမှာ လူတှေ အငျတာနကျနညျးပညာ နဲ့ ရငျးနှီး လာပွီ ဆိုရငျ ရောငျးသူနဲ့ ဝယျသူကွားမှာ ကွားဝငျ အမွတျထုတျဖုို့ဆို တာ နညျးလာမှာပါ။
အခုဆိုရငျ ဘာပဲ ဝယျဝယျ .
ကားဝယျမယျဆို . .
အိမျ ခွံ မွေ ရောငျး ဝယျ ငှား ဆိုရငျ . . .
ဒါကွောငျ့ ၂၁ ရာစုမှာ အမှနျ အကနျ အလုပျဖို့ လိုပွီး မိမိကိုယျကိုယျ ခတျေနဲ့အညီ အံဝငျခှငျကဖြွဈ အောငျ ကုိုယျစှမျးရညျ စိတျစှမျးရညျအမွဲ မွှငျ့ ပွီး နတေကျထိုငျတကျ ဖို့ . ကိုယျဝါသနာပါပွီး သူမြား အကြိုး ကိုယျ့အကြိုး နှဈဖကျ မြှမြှတတ ဖွဈမယျ့ အလုပျမြားကို ရှေးခယျြတကျရနျလိုပါတယျ။
ဒါဆို လှယျလှယျ ခမျြးသာအောငျဘယျလို လုပျရမလဲ ဆိုတဲ့ သူတှေ အတှကျ ကိုယျဝါသနာပါပွီး လူတှအေတှကျ အကြိုးရှိ ပွီး ကိုယျ့အတှကျ အကြိုး ရှိမယျ့ လုပျငနျးမြားကို ရှေးခယျြစခေငျြပါတယျ။ လူမြားကို နငျးပွီး ကိုယျအတှကျ အကြိုး ရှိမယျ့ အသပွာ ငှအေမွတျအစှနျးရမယျ့ အလုပျကို လုပျမယျဆိုပါက ရရှေညျ ခိုငျမွဲ မှာ မဟုတျတာကို သတိရပါ။ ကိုယျလုပျတာကောငျးနရေငျ တျောတျောနဲ့ ဘယျသူကမှ လာပွီး မကောငျးဘူး အပွောပါဘူး။ မကောငျးမှသာ အပွောခံ ရတာဖွဈတဲ့ အတှကျ သတိလေးမြား ထားစခေငျြပါတယျ။
Previous: Multi-level Marketing ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ ?
Next: လျစ်လျူရှုမထားသင့်တဲ့ လက်သည်းပြသနာ ၁၀ မျိုး